Tababarihii Hore Ee Arsenal Ee Unai Emery Oo Weerar Culus Ku Qaaday Mesut Ozil – Gool24.Net
Tababarihii Hore Ee Arsenal Ee Unai Emery Oo Weerar Culus Ku Qaaday Mesut Ozil
16/05/2020 Abdiwahab A. Abeye
Tababarihii hore ee Arsenal ee Mestu Ozil ayaa sheegay in Mesut Ozul uu ka hooseeyo ciyaartoyda kooxda kale ee Gunners oo bandhiggiisa iyo dedaalkiisuba aad u yar yihiin.
Unai Emery waxa tilmaamay in dabeecadda iyo go’aamada Ozil ay yihiin kuwo liita oo aan ku habboonayn kooxda Arsenal, taas oo uu ku dooday inay sabab u ahayd inuu kaydka dhigo waqtigii uu joogay Emirates, isla markaana uu marar badan kusoo dari waayey gebi ahaanba kooxdiisa.
Ozil ayaa dhibaatooday 18 bilood oo uu tabababaraha Arsenal ahaa Unai Emery, waxase uu dib usoo noolaaday intii uu shaqada qabtay Mikel Arteta oo siiyey ciyaaro joogto ah, dibna ugu soo celiyey kalsoonidii.
Kubbad-sameeyaha reer Germany ayaa waqtigaas ku dhowaaday inuu Emery dartii uga tago Arsenal, waxaana uu dhowaan bannaanka keenay sidii wax u jireen iyo dhibaatooyinkii uu kasoo mutay macallinka reer Spain.
“Ugu dambaynta waa inuu isagu is eego. Hab-dhaqankiisa iyo go’aamadiisa.” Ayuu yidhi Emery oo u warramay wargeyska Daily Mail.
“Anigu sida ugu badan ayaan iskugu dayay inaan u caawiyo Ozil. Intii aan xirfaddan ku jiray oo dhan, ciyaaryahannada hibada sare leh ayaa ahaa kuwa aan xiiseeyo, waxaanay usoo ciyaareen sida ugu wanaagsan ama si ku dhow sidooda ugu wanaagsan.
“Mar walba Ozil waan u dhibirsanaa marka laga eego waxyaabaha rabitaankiisa ah ee uu ku lug yeelanayo, laakiin hab-dhaqanka uu lasoo baxay, heerkiisa go’aan qaadashada, kuma filnayn.
“Waxa suurtogal ahayd in Ozil uu noqdo mid ka mid ah kabtannadayda, laakiin ciyaartoyda kooxdu may doonayn inuu isagu noqdo kabtan.”
Emery waxa uu Ozil tusaale ugu soo qaatay ciyaartii finalka Europa League ee Chelsea ay ku karbaashtay 4-0, taas oo uu tilmaamay in haba-yaraatee aanu ahayn mid wax soo bandhigay.